Gunsel B9 Nampidirina tamin'ny fiara an-trano TRNC | RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA90 TRNCGunsel B9 Nampidirina tamin'ny fiara an-trano TRNC
21 / 02 / 2020 90 TRNC, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, ANKAPOBENY, Highway, Headline, fiara
kktc fiara an-trano fiara bc nampidirina
"Günsel", fiara an-trano sy nasionaly an'ny Repoblika Tiorka any Sipra Avaratra, dia nampidirina tamin'ny fikambanana natao tao amin'ny Girne Elexus Congress Center. Ny maodely voalohany an'i Günsel, novokarin'ireo injeniera sy mpamorona Tiorka izay niasa 10 taona ary niasa 1,2 tapitrisa ora tao anatin'ny vatan'i Near East University, dia novokarina tamin'ny loko mavo, manga sy mena izay maneho ny tany, ny lanitra ary ny sain'ny TRNC. Ny famolavolana sy ny endrika anatiny an'ny Günsel B9 dia nankasitraka tokoa.
Praiminisitra Ersin Tatar, filoha faha-3 Dr. Dervis Eroğlu, ny Repoblikan'i Torkia Ambasadaoro in Nicosie, Ali Murat Başçer, Praiminisitra lefitra sy ny Raharaham-bahiny Minisitry ny Kudret Ozersay, Minisitry ny Fampianarana Nazim Cavusoglu, Minisitry ny Fitantanam-bola matotra Amcaoğlu, Minisitry ny Atitany Aysegul Baybars Kadri,-bahoaka Asa sy ny Fitaterana Minisitry ny Tolga Atakan, Toe-karena sy ny minisitry ny angovo Hassan Taçoy, Minisitry ny fizahantany sy ny tontolo iainana Deot. Ünal Üstel, minisitry ny fambolena sy ny harena voajanahary Dursun Oğuz, minisitry ny asa sy ny fiasa ara-tsosialy Faiz Sucuoğlu, ny filohan'ny antoko Turista Repoblikana Tufan Erhürman, komandin'ny Corps Peace Peace Cypriot Tiorka ny jeneraly Sezai Öztürk, Komandin'ny tafika miaro ny filaminana Tuğgeneral Altan Er sy filoha lefitry ny Repoblika Repoblika. Manodidina ny 3 eo ny vahiny avy any Tiorkia sy any ivelany no nandray anjara tamin'ny alina fampiroboroboana an'i Günsel, natrefan'i Töre.
Akaikin'ny oniversite Atsinanana, filohan'ny komity mpanampy Dr. İrfan Suat Günsel: “Ny dadanay dia Dr. Ny nofin'i Suat Günsel; Miaraka amin'ny famolavolana miaraka dia lasa zava-misy isika amin'ny fiasana andro aman'alina miaraka amin'ny vatana iray, ny fo iray ary ny finoana lehibe.
Akaikin'ny oniversite Atsinanana, filohan'ny komity mpanampy Dr. İrfan Suat Günsel dia nanao kabary tamin'ny alina izay nampidirany an'i Günsel B10, izay novolavolain'ny injeniera Tiorka izay manana R&D 9 taona ary fandinihana famolavolana. Ny nofin'i Suat Günsel; Avy amin'ny endrika ho an'ny R&D, avy amin'ny teknolojia ka hatramin'ny injeniera, niova ho zavamisy isika tamin'ny alàlan'ny niasa andro aman'alina tamin'ny vatana iray, fo iray, nanana finoana lehibe. Miaina miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra, avonavona ary fahasambarana izahay satria afaka mizara ny GÜNSEL aminao, ny firenentsika, ny firenentsika ary ny firenentsika ary ny hampahafantatra izany an'izao tontolo izao amin'ny fomba matanjaka. ”
Ny fanehoana fa ny fanatanterahana tetikasa lehibe toa an'i Günsel dia iray amin'ireo marika manan-danja indrindra amin'ny famokarana siansa momba ny siansa Near East University. Dr. Hoy i fanrfan Suat Günsel, "Teo amin'ny Anjerimanontolo East sy Girne University no lasa oniversite lehibe indrindra sy mandroso indrindra ao amin'ny jeografika ary naka ny toerany tamin'ireo oniversite hajaina eran'izao tontolo izao. Manana ny fotodrafitrasa ara-teknolojia sy ny fitaovana akademika izay hotanterahina mandritra izany, lahatsoratra efa ho roa arivo navoaka tao amin'ny diary iraisam-pirenena momba ny indostria ary tetikasa 385 izay an-dalam-potoana izao. ”
Ny fahaizan'ny famokarana an'i Günsel, izay hanomboka ny famokarana andiany amin'ny 2021, dia hahatratra fiara 2025 isan-taona amin'ny taona 20. Tamin'ny alin'ny fandefasana ny modely voalohany an'ny Günsel B9, ny maodely fampiroboroboana ny modely J9 faharoa, izay nafenina hatramin'ny anio, dia natolotry ny vahiny. Ny dingana fampandrosoana ny J9, izay natao toy ny SUV, dia kasaina ho vita amin'ny 2022 ary ny vinavina hampiroboroboana ny prototype. Akaikin'ny oniversite Atsinanana, filohan'ny komity mpanampy Dr. Amin'ny fampisehoana izay namboarin'i İrfan Suat Günsel omaly alina, ny famokarana maodely J9 modely faharoa dia hanomboka amin'ny 2024.
Ny fiovan'ny Günsel ny Repoblika Tiorka an'i Sipra Avaratra any amin'ny iray amin'ireo firenena manondrana fiara, dia hamorona fantsom-bidy lehibe ho an'ny toekaren'ny firenena. Amin'ny lafiny iray, Günsel dia hanome vola be dia be amin'ny TRNC miaraka amin'ireo fiara haondrany any ivelany, ary ny tahiry solika izay omen'i Günsel, izay ampiasaina an-trano dia hampihena ny habetsahan'ny solika haondrana. Noho izany antony izany, i Günsel dia mety hampihena be ny fatiantoka ara-barotra ivelany amin'ny alàlan'ny fanaovana fandraisana anjara manara-penitra amin'ny toekarena TRNC. Ny vola miditra amin'ny fanondranana izay hamboariny, ny toekarena hatsangana amin'ny indostrian'ny mpamatsy fiarakodia sy ny asa homena dia hahatonga an'i Günsel ho iray amin'ny toerana manan-danja indrindra amin'ny toekarena TRNC.
Praiminisitra Ersin Tatar: “Amin'ny maha Repoblika Tiorka an'i Sipra Avaratra, dia nahazo anarana lehibe sy mahery fo izahay. Tokony hanaiky ny rehetra fa i Suat Günsel, izay efa niasa nandritra ny taona maro hatramin'ny tolona, ​​dia niasa ho an'ny Repoblika Tiorka an'i Sipra Avaratra, dia iray amin'ireo mahery fo ireo. Betsaka ny olana ratsy ho an'ny bilaogintsika any Atsinanan'i Mediterane. Ny tantaran'ny fahombiazana nosoniavina teto dia nahamenatra ireo mpandahateny ratsy. Satria mahomby isika dia zanaky ny firenena mahomby, izay mamihina ny fireneny, mino ny fahatanterahana ary manana talenta. Ity ny Repoblika Tiorka an'i Sipra Avaratra! Androany isika dia mitory ny tantara. Günsel dia handray anjara lehibe amin'ny fanondranana entana, asa, ekonomika ary fampandrosoana. Tiako ny misaotra ny fianakaviana Günsel, izay nahomby tamin'io fahombiazana io. ”
3. Filohan'ny TRNC Derviş Eroğlu: “Nametraka ny fototry ny Oniversite Near East amin'i Suat Günsel izahay nandritra ny ministerako voalohany. Hatramin'izay andro izay, tany be dia be no napetrak'i Suat Günsel sy ny fianakaviany ka adinonay ny isa. Suat Günsel dia nanenjika ny tsara indrindra isaky ny tetikasa avy amin'ny oniversite hatrany amin'ny hopitaly. Ny fianakaviana Günsel dia afaka mirehareha fotsiny amin'ireo tetikasa izay nitombo ny sonia. Enga anie ny fahombiazanao haharitra. ”
Masoivoho ny Repoblikan'i Torkia Ali Murat Başçer ny Nicosie: “Ny tsenan'ny lozisialy eran-tany dia eo am-pitaterana vaovao. Filohan'ny Torkia Tayyip Erdogan Mr. Recep, Torkia ny fiara an-trano araka izay nolazainy tao amin'ny fivoriana amin'ny 27 Desambra tOGGer nampidirina androany, dia mitovy ny rehetra niditra hazakazaka ity. Günsel, nosoniavin'ny Near East University, dia hamorona ohatra manan-danja ho an'ny fampandrosoana ny teknolojia, R&D, ary tetikasa indostrialy ho an'ny oniversite rehetra. Misaotra am-pitiavana izay rehetra nandray anjara aho. ”
Tufan Erhürman, Filohan'ny antoko Tiorka Repoblikana: “Androany isika dia mitory amin'ny nofy tanteraka. Maneho ny fankasitrahako ireo izay niaina izany avonavona izany. Nitsidika ny trano famokarana aho dia nahita injeniera tanora niasa tamim-pifaliana tamin'ny fanombohan'ny adidiny. Misaotra azy rehetra aho. Milaza hatrany izahay fa tsy nanjavona ny mpamokatra. Ny fianakaviana Günsel dia manohy mametraka tetikasa antsoina hoe tsy azo atao. Miarahaba ny fianakaviana manontolo aho amin'ny fahombiazan'izy ireo. ”
Kudret Özersay, praiminisitra lefitra ary minisitry ny raharaham-bahiny: “Ny Repoblika Tiorka ao Sipra Avaratra sy ny mponina ao aminy dia mila tantara iray mahomby mihoatra ny iray. Günsel koa tantara mahomby momba ny fahombiazana. Ho an'ny firenentsika, te-hisaotra an'ireo rehetra nanasonia ity tantara nahomby ity aho, indrindra fa ny fianakaviana Günsel. Ny fampiasam-bola toy izany dia mitaky fahitana tsara. Niaraka tamin'i Günsel izy ireo, nasehon'izy ireo ny halehiben'ny fahitana an'ny fianakaviana Günsel sy ny Near East University. "
Hasan Taçoy, minisitry ny toe-karena sy angovo: “Günsel dia tetik'asa lehibe iray ho an'ny firenentsika izay tokony hino sy hiarovany hatramin'ny farany. Suat Günsel, izay nitondra soatoavina tena manan-danja tokoa ho an'ny firenentsika, dia nitondra soa lehibe ho an'ny firenentsika tamin'ny alàlan'ny nanonofinofinan'ny mpampianatra azy sy ny fianakaviany ary ny fiasa mafy hahatanteraka izany nofinofy izany. Miova izao tontolo izao. Tena manintona ny manana fiara fiara elektrika izay ho vokarina avy amin'ny masoandro ho firenena solar. Noho izany, tsy maintsy miaro an'io tetik'asa io izahay, izay hitanay fa tsy ho tanteraka ny nofy. ”
Minisitry ny asa sy ny filaminana ara-tsosialy Faiz Sucuoğlu: “Niresaka tamin'ny mpampianatra ahy i Suat Günsel taona maro lasa izay ary nilaza tamiko izy fa hamokatra fiara izy indray andro any. Rehefa nolazaiko taminy fa tsy mora izany dia nilaza izy fa hahatanteraka ny nofinofiko. Eto isika dia mitory ny tena hahatanterahan'izany nofy izany. Ny tantaran'i Günsel, izay nanomboka tamin'ny injeniera 10 ary mitohy amin'ny injeniera 100 ankehitriny, dia hahatratra injeniera an'arivony amin'ny taona ho avy. I Günsel dia hanolotra lalana ho antsika hitazomana ny tanorantsika amin'ny firenena amin'ny asa hamboariny amin'ny fanomezana anjara amin'ny fampihenana ny tahan'ny tsy fananan'ny tanora, izay nahatratra 19 isan-jaton'ny tanindrazantsika ankehitriny. ”
Ny modely voalohany an'ny Günsel B9 dia fiara herinaratra 100 isan-jato. Ny fiara izay afaka manao dia kilometatra 350 kilometatra amin'ny sarany tokana dia novokarina tamin'ny fampiarahana mitentina 10 936 tamin'ny fitambarany. Ny 140 mW. Ny fetran'ny hafainganam-pandehan'ny Günsel B100, izay mahatratra 8 km isan'ora ao anatin'ny 9 segondra, voafetra amin'ny lafiny ara-elektronika ho 170 km isan'ora. Ny bateria an'i Günsel B9 dia azo zahana ao anatin'ny 20 minitra fotsiny amin'ny fanamafisana haingam-pandeha ambony. Raha ampiasaina ny fanamafisam-bidy mahazatra dia 7 ora izany. Nandritra ny dingana fampandrosoana, nisy fifanarahana natao sonia miaraka amin'ny mpamatsy 100 mihoatra ny firenena 1,2 ho an'ny famokarana Günsel B9, izay injeniera 28 mahery no nandany ny 800 tapitrisa tapitrisa ora.
Mampitombo ny lanjany ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra amin'ny tsenan'ny lozisialy isan-taona. Ny isan'ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra amidy eran-tany amin'ny taona 2018 dia 2 tapitrisa. Ny varotra fiara mandeha amin'ny herinaratra, izay heverina fa mahatratra 205 tapitrisa ao anatin'ny 10, dia heverina fa hahatratra 2030 tapitrisa amin'ny 28 ary 2040 tapitrisa amin'ny 56. Ny fiara herinaratra dia hahatratra 2040 isanjaton'ny tsenan'ny fiara amin'ny 57.
Repoblika Tiorka any atsimon'i Sipra
University of East Near
Hankany Izmit ve ny sidina Bosphorus Express?